Mgbakwunye nke egwu ịkpa oke agbụrụ nke "Ice cream Trucks": abụ olu a na-ejikarị dị ka jingle nke "Ice cream Truck" Na-esite na abụ a na-akpọ "gerhụnanya nigger nwere anyụ Ha! Ewoo! Ewoo! »... (Vidiyo)
Site na: KongoLisolona: Septemba 26, 2020 00: 10 Enweghị asịsa
nigger ihunanya a anyụ Ewoo! Ewoo! Ewoo! : mérite la distinction du titre de la chanson la plus raciste en Amérique, sortie en mars 1916 par Columbia Records, elle a été écrite par l’acteur Harry C. Ejiji et a joué sur la représentation familière du peuple noir comme une « Bête de tête sans tête » dévorant avidement des tranches de melon d’eau.
Kedu ka o si mee ka ọ bụrụ akara ngosi agbụrụ na afọ 1800 na United States? Ihe ndi ozo nke ndi Afrika na ndi America bu otutu ndi nzuzu nke onu ozo maka otu ihe kpatara ihe mere ha ji jee ozi
Ndị agha ahụ bịara nwee mmetụta mgbe ndị ohu nwetara nnwere onwe ha n'oge agha obodo ahụ. Ndị na-eto eto na-eto, na-eri ma na-ere mmiri, na-eme ka mkpụrụ ndị a bụrụ ihe nnọchianya nke nnwere onwe ha. Ndị Southern Whites, nke nwere ohere nke nnwere onwe ndị ọhụrụ nke Blacks, mere site n'ime ka mkpụrụ a bụrụ ihe nnọchianya nke ọhụụ nke ụbụrụ, ụcha, ike na enweghi ihu ọha na-adịghị mma. Okpukpo ndi mmadu ndi mmadu na-agbakpochapu ebe a na-ewu ewu na omenala ndi omenala ndi Amerikal, na-eme nke oma na usoro ihe omuma ya abughi ihe omuma. Na 1900, ole na ole ndị America gaara eche na stereotype bụ ihe na-erughị ọkara narị afọ.
O bughi na ihe ndi ozo nke ogba ogugu nke ogwu adighi adi tupu epuo ya. Na echiche nke oge a na Europe, onye na-eri ihe na-eri anụ bụ onye Italy ma ọ bụ Arab. Okpokoro ahụ, ka otu onye uwe ojii Britain na-arụ ọrụ na Egypt na 1801, bụ "ọgwụgwọ maka ndị Arab dara ogbenye", obere ihe na-anọchite anya ezigbo nri. N'ebe Rosetta dị ọdụ ụgbọ mmiri, ọ hụrụ ndị bi na ya watermelons, "na ụdị ụcha; dị ka a ga-asị na ha na-atụ egwu onye na-agafe agafe lee " na akpụkpọ mmiri skins strew n'okporo ámá.
N'ebe ahụ, mkpụrụ osisi ahụ na-anọchite anya ọtụtụ àgwà ndị ahụ ọ ga-enwe na post-emancipation America: adịghị ọcha, n'ihi na iri nri na-adịghị mma. La paresse, car il est si facile de faire pousser des pastèques, et il est difficile de manger de la pastèque et de continuer à travailler – c’est un fruit qu’il faut manger assis. Ebe ọ bụ na mmiri na-atọ ụtọ, na-acha ya ma na-enweghị ezigbo uru. Ndị agha ndị a gara Amerịka, ma obere ahụ enweghị agbụrụ ọ bụla. Ndị America dị ka o yikarịrị ka ha na-ejikọta ihe mgbochi na ugwu Kentucky ma ọ bụ New Hampshire dị ka ndị ohu ojii nke South Carolina.
N'oge na-adịghị anya mgbe e wepụsịrị ha, ọtụtụ ndị Africa-America na-ere mmiri na-eme ka ha dị ndụ n'èzí ụlọ ọrụ. (Le akwụkwọ akụkọ bụ Frank Leslie,
Nke a nwere ike iyi ihe mgbagwoju anya n'ihi mkpa nke mmiri mmiri na ndụ ndị Africa America n'oge ịgba ohu. Ndị na-ahụ maka ndị ohu na-ahapụkarị ndị ohu ha tolite ma na-ere ha mmiri mmiri, ma ọ bụ na-ekwe ka ha were ụbọchị n'ụbọchị okpomọkụ iji rie ihe ọkụkụ mbụ.
L’esclave Israël Campbell glissait une pastèque dans le fond de son panier de coton pour que,lorsqu’il ne serait pas à la hauteur de son quota quotidien, qu’il ait au moins quelque chose à manger à la fin de la journée. Campbell kụziiri ohu ọzọ onye a na-etikarị ụtarị n'ihi na ọ gaghị ezute ya, ọ na-agbasa ngwa ngwa. Otú ọ dị, ịmalite imebi mmekọrịta ahụ.
Blacks toro, rie ma ree mmiri n'oge ịgba ohu, ma ugbu a, ọ bụ egwu nke agbụrụ. Maka ndị ọcha ahụ, ọ dị ka ha na ndị ojii na-egosipụta nnwere onwe ọhụrụ ha, na-ebi n'ala ha, na-ere mmiri na-ere ahịa na ahịa, na ka njọ, na-esi ísì ụtọ n'èzí. Ezigbo ezinụlọ ọcha na-acha ọcha na mgbe nwa ha nwanyị Clara hapụrụ n'ụlọ n'oge na-adịghị anya mgbe e wepụsịrị ya na 1865.
Henry Evans, nwa nwoke na-acha ọcha nke Clara nwere ike ịbụ nne nke abụọ, tiri mkpu ruo ọtụtụ ụbọchị mgbe ọ hapụsịrị. Ma mgbe o zutere ya n'otu ụbọchị n'okporo ámá, ọ jụrụ mgbalị ya n'udo. Mgbe Clara nyere ya okwute, Henry gwara ya na ya "agaghị eri nri ndị Negro na-adịghị eri." Akwụkwọ akụkọ emewo ka njikọ a dị n'etiti okpokoro agba na nwa ojii n'efu. Na 1869, Illustrated Akwụkwọ akụkọ site na Frank Leslie nwere ike ịbụ na ọ na-ebipụta ihe mbụ caricature nke Blacks na-eri na okpokoro. Akụkụ ahụ e depụtara kọwara: Le Negro nke South adịghị egosipụta n'ụzọ doro anya na ihe ụtọ ya na-amasị ya karịa ọchịchọ ya nke ukwuu maka watermelons. Nwa akwukwo ndi mmadu nwere onwe ya kachasi ike n'ile ya anya maka nkpuru a na-enye ume.
Ekeme ndidi akpa uw ut ¯ nkp o emi eket i ¯ nde aba ¯ na ukp o ¯ n ukp o ¯ n okp o ¯ n, c. 1869. (Ihe ngosi nke Frank Leslie dere)
Afọ abụọ mgbe e mesịrị, otu akwụkwọ akụkọ Georgian kọrọ na e jidere nwa nwoke ojii n'ihi nsị a na-egbu egbu na nzube nke igbu onye agbata obi ya. E nwere isiokwu ahụ Negro Kuklux Na-ekwu na ime ihe ike ojii na Ku Klux Klan, na-arịọ maka ọdịmma ma ọ bụrụ na onye isi nke Republican Party Congress subcommittee na-enyocha ya Klan ga-enyocha omume nke onye a nwere onwe ya.
L’article commençait par une description méprisante de l’homme qui se dirigeait vers le palais de justice : N'ehihie Satọdee, anyị zutere ihe ntinye 15, na-ebu nnukwu ogwu na ogwe aka ya, na-aga n'ụlọikpe ahụ. Le mpụ abụghị ihe e ji egbu ọchụ, ma ọ bụ iji ọha na eze na-ejegharị na mkpụrụ a nzuzu. Ozi mbu nke stereotype a na-eme ka mmiri ahụ ghara ịdị njikere maka nnwere onwe. N'oge nhoputa ochichi nke 1880, ndi Democrats boro ebubo ndi omeiwu nke South Carolina, nke kachasi na oji n'oge nwughari ya, site n'igbu ego ndi ego ji ego na onu mmiri maka ume ha; akụkọ ntolite a achọpụtala ebe ọ na-ede akwụkwọ akụkọ ihe mere eme.
Ihe nkiri a na-ahụkarị nke DW Griffith na-acha ọcha ọcha, The Birth of a Nation, sorti en 1915, incluait un festin de pastèques dans sa représentation de l’émancipation, alors que des Blancs du Nord corrompus encourageaient les anciens esclaves à cesser de travailler et à profiter d’une pastèque. N'ime nkatọ ndị a, ndị ojii ekwesịghị inweta nnwere onwe karịa ụmụaka.
Alors que les pianos et les partitions de masse sont devenus populaires à la fin du XIXe siècle, les « chansons de cris », des airs populaires qui se moquaient des Afro-américains pour leurs manières paresseuses, insensées et enfantines. (site n'ikike Brown University Library)
Ná mmalite nke narị afọ nke 20, stereotype nke anyụ nọ ebe nile: ndị na-ekwo ekwo, akwụkwọ aka akwụkwọ, egwu egwu, ose na nnu nnu. Otu akwụkwọ ozi mara mma na-egosi otu agadi nwa nwoke nke na-ebu ogbe na ogwe aka ọ bụla iji chọta onwe ya na ọkụkọ na-agagharị. Nwoke ahụ kwara arịrị, sị: "M abughi m nwoke furu efu na ndu.»
Dị ka nwa nwoke, akwụkwọ ozi ahụ pụtara na ọ nwere obere ọrụ na obere mmasị karịrị afọ ya. Edwin S. Porter, ama ama maka iduzi The Great Train Egwu na 1903, kwadoro ya Anyụ Patch afọ abụọ mgbe e mesịrị, nke gosipụtara darkies N'ịbụ ndị na-abanye n'ime mkpịsị mmiri, ndị mmadụ na-agbanwe dị ka ọkpọ na-achụ ndị ohi Klux Klan, qui s’habillaient en fantômes pour effrayer les nwa), ihe egwuregwu na-eri nri mmiri na ìgwè ndị ọcha na-acha ọcha na-emesị na-ese ndị ohi si na ụlọ ndò ahụ. Ogologo oge ochie nke ime ihe ike a na-eme iji mee ka agbụrụ dị iche iche na-achị ọchị.
O nwere ike iyi ihe umuaka iji mara nkpuru nke oma. Na eziokwu bụ na ọ dịghị ihe gbasara ịkpa ókè agbụrụ n'onwe ya na watermelons. Ma omenala omenala nwere ike ịkpụzi ọhụụ nke ụwa na ndị bi na ya, dị ka mgbe onye uwe ojii Darren Wilson hụrụ Michael Brown dị ka "mmụọ ọjọọ" karịrị mmadụ.
Ihe nnọchianya ndị a nwere mgbọrọgwụ nke akụkọ ihe mere eme n'ezie, karịsịa n'oge a. Ogwu, egwu nke ndi ọcha bu ndi mmadu. Umu ozo jiri stereotype a na-agwa ndi mmadu - iji ihe ha na-eme iji kwalite nnwere onwe onwe ha ma mee ka ọ bụrụ ihe ịkwa emo. Na njedebe, ọ dịghị mkpa ma ọ bụrụ na mmadụ chọrọ imejọ akụrụngwa ịkpa ókè agbụrụ, n'ihi na stereotype nwere ndụ nke aka ya.
Ọkt24 01: 37